musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Vashanyi Vanowana Phuket Husiku Hupenyu Hunopera Pakarepo pa9
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • Hospitality Industry • nhau • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Phuket hupenyu hwehusiku
Mahofisi eThailand eThailand muPhuket akavhara nzvimbo dzine njodzi ndokumisa zviitiko zvinogona kuendesa COVID-19 nePhuket husiku husiku hwakavharwa pa9.
Kumiswa uku kunokanganisa mabhawa, mabhawa, uye dzimwe nzvimbo dzekuvaraidza dzinoda kuti mabhizinesi avharwe na9 manheru.
Zvakare zvinosanganisirwa muna9 o'clock yekuvhara mvumo yekudyira-mumaresitorendi nemashopu ezvitoro.
Zvitoro zveKaraoke, nhandare dzenhabvu, nhandare dzemakoko, uye makwikwi eshiri anofanirawo kutevedzera nguva yekuvhara.
Gavhuna wePhuket Narong Woonsew akasaina mutemo wekuvhara nzvimbo idzi uye kumisa zviitiko zvinogona kuparadzira COVID-19.
Akaisanganisira nzvimbo dzekutenga dzemuno dzinogona kuramba dzakashama kusvika na9 dzemanheru panguva imwe chete dzichidzikamisa huwandu hwevatengi uye kumisa zviitiko zvekushambadzira uye masevhisi emitambo yavo yemitambo uye mapaki evaraidzo.
Kudya-mukati mumaresitorendi kunofanira kumira na9 manheru. Vakuru vehurumende yemunharaunda uye vashandi vemasangano ehurumende dzemunharaunda havafanirwe kusiya Phuket kunze kwekunge vaine zvikonzero zvekukurumidzira uye vachigamuchira mvumo kubva kuvakuru vavo.
Iwo marongero anotanga kushanda nhasi, Chikunguru 20, uye anomhanya kusvika Nyamavhuvhu 2. Ichi chiito chehurumende chiri mukupindura mukuwedzera kwezviitiko zveCOVID-19 munzvimbo dzakasiyana dzePhuket.
Vazhinji vanhu muThailand (vangangoita 61 muzana) vanofunga mamiriro azvino neCOVID-19 haasi kuzozvigadzirisa kusvika makore mashoma kubva zvino, maererano neongororo yekuongorora yakaitwa naSuan Dusit Poll.